ကိုစိုး| January 5, 2013 | Hits:9,574
| | ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူရှိ ဂက်စ်သန့်စင်စက်ရုံ (ဓာတ်ပုံ – ကိုစိုး / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ဒေသ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နာလန်မထူသေးမောင်တောနေ မွတ်စလင် အိမ်ထောင်တစုလျှင် ကလေး ၂ ဦးသာ မွေးခွင့်ရှိRNDP နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကြိုပြင်မည်မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စလိုကြောင်း တရုတ်က လေသံပစ်တရုတ်၏ စီမံကိန်း စာချုပ်များ ပြန်ပြင်ရန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ တိုက်တွန်း နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Golden Owl January 6, 2013 - 4:06 am	Unbelievable. Even Ne Win cared about his birthplace Pauk Khaung(Pha Khaung). He left behind one good thing which was building good road to his hometown.